ဟေလီဘောဝင်းနဲ့ စေ့စပ်လိုက်တဲ့ ဂျက်စတင်ဘီဘာ
access_time 1 year ago account_circleEi Ei Mar
ကနေဒီယမ်ပေါ့ပ်စတား ဂျက်စတင်ဘီဘာဟာ အမေရိကန်မော်ဒယ် ဟေလီဘောဝင်းနဲ့ စေ့စပ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန်သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ဖော်ပြထားတာကို တွေ့ရှိရပြီး ယုံကြည်လောက်တဲ့ အချက်အလက်တွေလည်း တွေ့ရှိရပါတယ်။
Photo : etonline
ဂျက်စတင်ဘီဘာတစ်ယောက် စေ့စပ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းက ဇူလိုင်လ ၈ ရက်နေ့ကစတင် ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီး အတည်ပြုနိုင်တဲ့သတင်းတွေလည်း ထပ်မံထွက်ပေါ်လို့နေပါတယ်။
TMZ, CNN နဲ့ E! တို့မှာ ဂျက်စတင်ဘီဘာနဲ့ ဟေလီဘောဝင်းတို့ရဲ့စေ့စပ်သတင်းကို အတည်ပြုထားပြီး ဒီသတင်းကို BBC မှာလည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒီသတင်းဟာ အမှန်ဖြစ်ကြောင်း နောက်ထပ်ယုံကြည်စရာ အချက်တစ်ချက်ကတော့ ဂျေဘီရဲ့ မိဘတွေက အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ထူးထူးခြားခြား စာလေးတွေ ရေးသားထားတာပါပဲ။
ဂျေဘီရဲ့ဖခင် ဂျာရမီက အင်စတာဂရမ်မှာ ဂျေဘီရဲ့ ပုံတစ်ပုံတင်လိုက်ပြီး "နောက်ထပ် ကဏ္ဍအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။ ဂျေဘီရဲ့မိခင် Pattie Mallette ကလည်း သူမရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကို Twitter မှာ ရေးသားထားပါတယ်။ သူမရေးထားတဲ့စာကတော့ "Love Love Love Love Love Love Love." တဲ့
အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ် ဂျေဘီနဲ့ ဆယ်လီနာဂိုးမက်စ်တို့ ပြတ်သွားပြီးတဲ့နောက် ဂျေဘီနဲ့ ဟေလီတို ပြန်တွဲခဲ့ကြတာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တုန်းက ဂျေဘီနဲ့ ဟေလီတို့ တွဲခဲ့ဖူးကြပါသေးတယ်။
အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ် ဟေလီဘောဝင်းဟာ American Vogue, Marie Claire နဲ့ Spanish Harper's Bazaar စတဲ့ မဂ္ဂဇင်းတွေမှာ ပါဝင်ဖူးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မော်ဒယ်ရှိုးတွေ၊ သီချင်းဗီဒီယိုတွေနဲ့ ရုပ်မြင်သံကြားရှိုး အတော်များများမှာလည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
သူမရဲ့ဖခင်က သရုပ်ဆောင်နဲ့ ထုတ်လုပ်သူ Stephen Baldwin ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ဦးလေး Alec Baldwin ကလည်း သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
ကေနဒီယမ္ေပါ့ပ္စတား ဂ်က္စတင္ဘီဘာဟာ အေမရိကန္ေမာ္ဒယ္ ေဟလီေဘာဝင္းနဲ႔ ေစ့စပ္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေဖာ္ျပထားတာကို ေတြ႕ရွိရၿပီး ယံုၾကည္ေလာက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြလည္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။
ဂ်က္စတင္ဘီဘာတစ္ေယာက္ ေစ့စပ္လိုက္ၿပီဆုိတဲ့သတင္းက ဇူလိုင္လ ၈ ရက္ေန႔ကစတင္ ထြက္ေပၚလာခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အတည္ျပဳႏုိ္င္တဲ့သတင္းေတြလည္း ထပ္မံထြက္ေပၚလို႔ေနပါတယ္။
ေဂ်ဘီရဲ႕ဖခင္ ဂ်ာရမီက အင္စတာဂရမ္မွာ ေဂ်ဘီရဲ႕ ပံုတစ္ပံုတင္လုိက္ၿပီး "ေနာက္ထပ္ က႑အတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားေနတယ္လို႔ ေျပာထားပါတယ္။ ေဂ်ဘီရဲ႕မိခင္ Pattie Mallette ကလည္း သူမရဲ႕စိတ္လႈပ္ရွားမႈေတြကို Twitter မွာ ေရးသားထားပါတယ္။ သူမေရးထားတဲ့စာကေတာ့ "Love Love Love Love Love Love Love." တဲ့
အသက္ ၂၄ ႏွစ္အရြယ္ ေဂ်ဘီနဲ႔ ဆယ္လီနာဂိုးမက္စ္တုိ႔ ျပတ္သြားၿပီးတဲ့ေနာက္ ေဂ်ဘီနဲ႔ ေဟလီတုိ ျပန္တြဲခဲ့ၾကတာ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တုန္းက ေဂ်ဘီနဲ႔ ေဟလီတုိ႔ တြဲခဲ့ဖူးၾကပါေသးတယ္။
အသက္ ၂၁ ႏွစ္အရြယ္ ေဟလီေဘာဝင္းဟာ American Vogue, Marie Claire နဲ႔ Spanish Harper's Bazaar စတဲ့ မဂၢဇင္းေတြမွာ ပါဝင္ဖူးပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေမာ္ဒယ္႐ႈိးေတြ၊ သီခ်င္းဗီဒီယိုေတြနဲ႔ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား႐ႈိး အေတာ္မ်ားမ်ားမွာလည္း ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။